Izikhundla zeeMisebenzi ze-Emirates Amacebiso kunye ne-Dubai City Inkampani e-UAE 🥇
Imisebenzi ye-Emirates Yiya phambili kwaye ujonge uMsebenzi kwi-UAE
Imisebenzi yaseMzantsi Afrika e Dubai
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at January 15, 2018
Imirates Emirates e Dubai
Izibonelelo zeMiddle East kunye nendlela yokuzifumana?
Emirates Imisebenzi yabathumeliweyo, sonke siyabazi kwaye sonke siyabafuna. Ekuphela kwento abanye abafuna ikhondo abangayaziyo yindlela yokubafumana. dubai Iinkampani ngokuzithandela ukuthatha iingcali kwimiba. Umzekelo, bakwiiPhilippines abafuna umsebenzi abasebenza ngaphakathi UAE. kwelinye icala, Indian abasebenzi baphumelele ngempumelelo udliwanondlebe ngemisebenzi ye-Emirates. UMzantsi Afrika uyachaza ukuthanda ukusebenza e-UAE. Umsebenzi we-Emirates Esona sivumelwano sihle sokwenza umsebenzi weqonga.
Phantsi kwale meko, ukuba ungumzingeli wezinto zamazwe aphesheya. Qhubeka nabanye kwaye ujonge umsebenzi e-UAE. Ewe kunjalo, eminye yemisebenzi eboniswayo kunye nokusetyenziswa kwemisebenzi kunokuba nzima. Kodwa ngaba kukwimdla yakho ukwenza isicelo sengqesho ngempumelelo. Umntu onephupha kunye nombono. Unamandla ngakumbi kunomntu onenyani kunye nohlahlo-lwabiwo mali olukhulu. Nokuba kwi IUnited Arab Emirates.
Ngaba kulungile ukuba uthathe imisebenzi yesikhathi se-Dubai?
Uhlobo olunomdla kakhulu lwemisebenzi luyimisebenzi yexeshana eDubai. okwethutyana umsebenzi unokuba ngowona mthombo wokufumana umvuzo okanye ukongeza kumvuzo wakho. Ngapha koko ukufumana iiyure ezongezelelekileyo kwimisebenzi yemini kunokuba nzima kakhulu. Kodwa umzekelo, unako fumana umsebenzi njengomgcini wevenkile okanye umncedisi wentengiso. Kwaye uya kukwazi ukwenza imali ngakumbi. Imisebenzi ye-Emirates kulula kakhulu ukuyifumana ukuba uyilawula kakuhle kwaye wenza uphando lwendawo olomeleleyo.
Ingeniso yengeniso yengxenye ingasetyenziselwa izinto ezininzi. Ngokomzekelo, ungagcina imali kunye nexesha elizayo ukuchitha kwi-UAE. Indlela elula yokufumana olo hlobo lwenzuzo iyakwenza ngokuthe ngqo. Ngaloo ndlela, fumana kwakhona kwakhona kwaye uhambe ngekharityhulam yakho. Ngokubanzi ukuthetha ngeendawo zokudlela zaseDubai kunye neeresityu. Ngalo lonke ixesha ujonge abasebenzi. Kule meko, kuya kufuneka unyanzelise ingqondo yakho kwaye phuma uye kukhupha i-CV.
Ngokuqinisekileyo imisebenzi yesikhathi esithile ilungile ukukunceda ngokulungisa uhlahlo lwabiwo-mali. Sincoma ngokukhawuleza ukuba ufumane enye ingeniso. Ngokuqinisekileyo e-Dubai okanye e-Abu Dhabi, uyayifuna ukuba wenze yakho Indlela yokuphila yaseArabhu. Kwelinye icala, ezona ndawo zibhetele zemisebenzi zikhawulezayo ukukhangela umsebenzi iinkampani. Ke, unale nto engqondweni, jonga Inkampani yebhodi yomsebenzi e Dubai kwaye website yegosa yokuqesha. Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho.
Ukukhangela imisebenzi yeehotele e Dubai?
Ukubeka enye indlela yokufumana izibhedlele kwimisebenzi yase-Emirates. Olu hlobo lwengqesho lukhulu umthombo owenzelwa amava ngamazwe ngamazwe. Umsebenzi wehotele unamanqaku ambalwa. Iihotele zinamasebe angaphezu kwe-10. Ethubeni, ungaqala njengombumbi wekhitshi kwaye kwiminyaka embalwa ukhuthazwe kwikhitshi lasekhitshini. kwelinye icala, ungaqala njengosamkeli kwaye ukhule ngezakhono zakho ukuya kulawulo jikelele.
Ngokukodwa e-Dubai, zontathu iihotele ezininzi kakhulu apho unokufumana ezona zinto zilungileyo kwicandelo le-Emirates Imisebenzi. Kwi-UAE unakho fumana umsebenzi. Kwaye ikhunjulwe loo nto hayi kuphela isixeko esinye esikhoyo kwi-7 Emirates kwimisebenzi. I-Abu Dhabi yinto elungileyo yokwenene yabasebenzi. Bambalwa abantu abafuna umsebenzi weHotel e-Abu Dhabi. Kwicala elifanelekileyo, ufanele ukuba ulumkile ekuzingeleni umsebenzi wephupha. Kwaye ukhethe enye i-Emirates ye-7, umzekelo, kukho imisebenzi enikezelwayo kwiidolophu zase-Abu Dhabi. Konke okufuneka ukwenze kukuthenga imoto encinci kwaye uqhubele kwihotele.
Kwelinye icala, ukusebenza e-Emirates kwaye ukhuthazwe ukuba usebenze kwi-7star Hotels kuyamangalisa. Kwaye kwisixeko samaphupha, yonke into inokwenzeka. Ungaze uyeke kwaye uthumele isicelo sengqesho. Nokuba usebenza ngoku enye Inkampani yase Dubai.
Iseluleko somSebenzi ngemisebenzi yoKhuseleko e-Dubai
Omnye umsebenzi omangalisayo we-posh ukukhetha e-UAE. Iinkwenkwezi ezingenakubalwa ezingenakubalwa kunye neenkwenkwezi zeMovie ezizayo ESIXEKO. Umzekelo, ukuhamba ngetayile ukusuka kwi-mission akunakwenzeka utyelele I-United Arab Emirates. Ngaphantsi kwezi projekthi, ungaqala njengabalindi bomzimba. Inqanaba elilandelayo kuyo kukhuseleko lwabucala lweshishini le-VIP. Okanye udibene nearhente zabasebenzi imisebenzi elula. Ekuhambeni kwexesha ukuthengwa kweeNdawo zokuThengwa zifuna i-securities ku-UAE. Ubunini bendawo yokuphenya ukufuna abahlaseli. Imisebenzi yekhamera yemisebenzi yekhamera ibhetele ukujongana nokuzingela abasebenzi abasanda kuphumelela.
Ngokubanzi abathetha bezokhuseleko kwi-UAE. Iimfuno ukuze ndikwazi ukusebenza ngokuqina ishishini ngokuchanekileyo. Umsebenzi omninzi kunye nokulawula umsebenzi kwindawo ekhawulezileyo ekhawulezileyo. Umsebenzi wezokhuseleko kubandakanya ukuqinisa amaxesha abekiweyo. Umgqatswa ngamnye kufuneka abe nezakhono zolawulo lweprojekthi ezinamandla amava eMpuma eseMpuma sisibonelelo kwimeko. Isakhono sokunxibelelanisa sibalulekile kwizikhundla eziphambili. Makukhunjulwe ukuba uMlawuli wezokhuseleko. Ingakuthumela ukuba wenze imisebenzi enobungozi obukhulu. Igosa lokhuseleko linokubona indawo ezinomngcipheko ophezulu kakhulu wokusebenzisa.
Kuhlalutyo lokugqibela, ungathunyelwa ukuba ukhangele igumbi lolawulo lokhuseleko yeVIP. Ukulayisha i-bay kunye nokujikeleza nokujonga. Kwakhona ukubuyela kwiNdlu nge-VIP yokujonga indawo yokupakisha. Kwicala elifanelekileyo, icandelo lezokhuseleko linemivuzo eqinileyo eDubai. Ingakumbi kwindawo enomngcipheko omkhulu wokusebenza.
Indlela yokufumana ukuhamba kunye Imisebenzi yoMqhubi e Dubai
Kukho amathuba amaninzi emisebenzi kwiimarike zemisebenzi yase-Emirates. Ukuthetha jikelele ukukhangela imisebenzi e Dubai kwishishini lokuqhuba. Kulula ukuba ungaqala ukusebenza njengomqhubi wangasese. Umzekelo uber sebenza kwiimeko ezinjalo. Kwelinye icala imisebenzi yabaqhubi beteksi nayo iyafumaneka. Kodwa oko kuya kuba lide kakhulu ukufumana kuya kufuneka ungqinisiswe.
Imisebenzi yokuhamba e-Dubai ayithandwa kangako e-Emirates. Kuba eDubai Unokufumana imisebenzi ehlawulwa kakuhle kunye nequmrhu elikhulu. Kufuneka ukhumbule ukuba ubububhanxa obubonelela ngesithuba somsebenzi malunga nezithuba zokuhamba. Ukuqhuba nge Limousines lelinye lamathuba amahle okwenza umvuzo ofanelekileyo. Unako fumana umsebenzi ukulungiselela ukukhanya iveni. Ngokusekwe kuloo nto kuqhuba uyolo ukuba ubambe iilayisensi zokuqhuba.
Njengombandela weinyani Philippines Kwaye amaNdiya amava aphuma elizweni. Ndiyakwazi faka isicelo sesikhundla somqhubi kwinkampani eUber. Olu hlobo lokunikezela yeyona ndlela ilula yokufumana umsebenzi kwi-UAE. Izikhundla zokugqibela inkampani yethu ekucebisa ukuba ufumane. Kukuba wonwabe umqhubi wangasese.
Indlela yokufumana umsebenzi we-HR e-Dubai City?
Elinye inqaku eliphambili lomsebenzi wakho linokuba lishishini lokuqesha. Izakhono zolawulo lwabasebenzi kwi I-Middle East yamkelekile ngokumangalisayo. Imisebenzi ye-Emirates efana ne-HR umlawuli kubandakanya iiyure ezininzi kunye nokusebenza. Ungasathethi ke ngokusebenza phantsi koxinzelelo njengegosa eliphezulu. Dubai City iinkampani ezinje ngehotele kunye namashishini ezemali ukuncedisa abagqibeleleyo abaphumelele kwi-MBA ukukhuthazwa kwangaphakathi kwii-HR Junior positions.
Ishishini lokuqesha e-Emirates yinto enkulu. Nangona kunjalo ukuya kwisebe le-HR ngaphakathi kwinkampani Kufuneka uphuhlise izicwangciso zokwenza okuqinileyo. Kwishishini ngalinye lokuqasha umqeshi, uya kufumana. Ku Ukufumana ingqesho kwisikhokelo nkampani ngomzekelo. Kufuneka ube neyona nto ubuncinane be-3 yamava. Ulawulo lwe-HR luvelisa isicwangciso sokufikelela kubasebenzi basebenzi. Kufuneka kwakhona ukuhlangabezana nomhla wokugqibela oceliwe kwiimpawu ezifanelekileyo. Kwimeko engalunganga, ufuna idanga.
Kwakhona, kufuneka sicebise ukuba imisebenzi yeHR ikwindawo yaseDubai nase-Abu Dhabi. Ke iindleko zokuphila ziyenyuka thelekisa iinkampani zomama. Kodwa kwicala elifanelekileyo, umvuzo wakho uphakama kwi-Emirates. Njengamagosa e-HR unokufumana ngaphezulu kwe- $ 3k ngenyanga ukuya kwi- $ 5k ukuba uliqhawe elisebenzayo.
Unokufuna njani umsebenzi kwi-Dubai kunye ne-visa?
Ukubeka enye indlela, wonke umntu ofuna umsebenzi okhuphisana nabanye abafuna umsebenzi e-UAE. Ngesi sizathu, amawaka abazingeli bomsebenzi abazithumela kwi-CV Nkampani zase Dubai. Kwicala elifanelekileyo, imeko efanayo yeyomntu ngamnye. Ke une-visa kwaye kufuneka wenze ntoni? Eyona ndlela ibalaseleyo kukubetha nje kubaphathi babasebenzi kwi-UAE. Ukuba uneVisa kwiimarike zengqesho ivulelekile kuwe. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka uhlasele abaqeshi kunye nabaqashi ngeemarike zendawo.
Imisebenzi yeVisa inikezelwa kuye wonke umntu okhangela umsebenzi. Ityala elibi kakhulu xa i-visa yakho izophelelwa liphela kungekudala. Sukuba nexhala lokufumana umsebenzi. Nangona kunjalo, uyafuna ukuba ube ngumsebenzi ekufuneni umsebenzi. Yenza oko kwenzeke kwaye ufumane loo nto phupha umsebenzi ngokukhawuleza. Kuphela nje unayo i-visa kwaye xa uhlala e-Dubai ixesha ligeleza. Musa ukuchitha ixesha kwaye uqhubeke nokuthumela i-Resumes.
dubai kunye neVisa lilizwe eliphuphayo lomntu ngamnye. Unokufumana umsebenzi ngokukhawuleza kwaye awunangxaki nabaqashi abaza kubakho. Unga qalisa umsebenzi ngokukhawuleza kunye nesikhokelo sethu sokufuna umsebenzi. Akukho mbuzo ebuzwa ngumqeshi wakho wekamva ngaphandle koko. I-akhawunti yebhanki kwaye izalise isicelo somsebenzi. Yiyo yonke into oyifunayo ukuba unayo i-visa yokusebenza e-Dubai.
Imisebenzi yokuLondolozwa kweMisebenzi e-Dubai kunye neMisebenzi yezoThutho e-UAE
Umsebenzi wezinto zokuhamba kunye neshishini lokuhamba. Ngale njongo, kufuneka wenze uphando olunzulu kwiinkampani eziqeshayo ngoku. Izakhono zonxibelelwano ezibalaseleyo ziyimfuneko kubaphathi bezothutho. Okokuqala, ulwazi olufanelekileyo lwenkqubo yokulawulwa kwendawo yokugcina izinto ngokuqinisekileyo inokukunceda ufumane umsebenzi omtsha e-Dubai. Ngokuqinisekileyo, abaviwa abanamava baya kunikwa ithuba lokukhetha ixesha.
Indima yeenkampani zokuthutha njengoko igosa lezinto zokusebenza liququzelele kakhulu amaqela eendawo kunye nezinto eziphathekayo. Ngokuqwalasela ukuqokelela izinto eziphathekayo kwi-co-operated iinkampani e-Dubai City kunye nokubeka umyalelo kubaboneleli ngelizwe.
Ngomqondiso ofanayo Indawo yokuma komhlaba neyokuhambisa ishishini nokulungiselela ukuhanjiswa kunye nokuqokelelwa kwamasebe enkampani. Kwangelo xesha, isikhundla sakho kubandakanya ukujonga kunye nokulungelelanisa imisebenzi yomqhubi. Njengombandela, ukulungiselela umthombo omtsha wee-odolo kunye nokuqokelelwa kweesampuli ezisebenzayo kwabanye luxanduva oluphambili.
Nangona oku kunokuba yinyani yokusebenza iinkampani ezise Dubai nase-Abu Dhabi. Ukuqesha abafuna umsebenzi kuphela nge-2-3 iminyaka yamava afanelekileyo ukuze uqinisekise ukuba unenkcukacha ezilungileyo kunye nawe. Kufuneka ukhunjulwe ukuba ulwazi lwe-logistics industry e-Emirates. Kwaye i-ID yase-United Arab Emirates yokuqhuba ilayisenisi yokuqhuba imoto ukuba ngumntu osanda kuqashwa e-Dubai.
Indlela yokufumana imisebenzi ye-Engineering kwi-Dubai?
Ethubeni, ukukhangela amathuba emisebenzi yobunjineli eDubai. Yenza abafuna ikhondo abafuna umsebenzi. Ngamaxesha ngamaxesha Unokufumana isikhundla sobunjineli kwimidiya yoluntu. Ukuza kuthi ga ngoku, iinkampani zeDubai zobunjineli eziphambili zibandakanya izikhundla ezininzi. Njengoko sele kuphawuliwe EmaMbindi-Mpuma ungafumana izithuba izikhundla zomphakathi kunye nezikarhulumente. Kanye kunye nezithuba zomsebenzi, kunye nokusebenza kwamanjini oombane kunye ne-biotech.
Ukuba ujonge umvuzo ohlawulwa kakhulu kwiiprojekthi zobunjineli. Nyusa kwakhona ukuze ufumane imisebenzi enqwenelekayo. Iinjineli ezinamava eminyaka ye10 bonisa umsebenzi wakho kwi-UAE. Zama ukulungiswa ngokutsha komhlaba, iinkqubo zobunjineli bobuchule bokuhamba, kwelinye icala, neenqwelomoya kwaye zijongwe kakhulu kumgangatho wekhondo lomsebenzi.
Ngelo xesha, ubuninzi bezobunjineli mathuba emisebenzi nangaphandle kweemveliso. Ngokuthe ngcembe babekwa eDubai Industrial City naseDubiotech. Ukuya esiphelweni apho unokufikelela kwiinkampani zedolophu yaseDubai Dubai kunye neenkampani ze-Abu Dhabi ngokusebenzisa izixhobo ezikhoyo kwi-Intanethi Uphando okanye uqhagamshelwe. Eyona ndlela yokufumana ingqesho zobunjineli eDubai. Oko kukuthi, kukuthi faka isicelo somsebenzi waseDubai kunye nokufikelela kwiiarhente zokugaya abasebenzi ukuze ufumane uncedo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba unamava kwi-Aerospace yobunjineli uphakamise isandla sakho uze ukhangele I-Emirates Mars Mission.
Kutheni kufuneka i-expats isebenze kwimisebenzi kaRhulumente wase-Dubai?
Into yokuqala yokukhumbula a umsebenzi karhulumente is indlela engcono kakhulu ye-Dubai Jobs. Ukubonisa ukuba ungumzingeli wekhondo lomsebenzi. Ngokubanzi ngokujonga kutshintsho lomsebenzi kwenza ubani acaphuke. Kwelinye icala, unganikezeli. Yijonge kwimisebenzi ekumgangatho ophezulu kuphela abo babucala bayakhawuleza ukuyifumana. Umsebenzi kaRhulumente uthatha ixesha. Abanye izicelo zengqesho ezithatha ukuya kwiinyanga ze-6-8.
Kukho ithuba e-Emirates ngamathuba karhulumente. Ngaphantsi kwezo meko, singakunceda neenkampani zikaRhulumente kunye nophando lwakho lomsebenzi. Ngesi sizathu, Inkampani yeSixeko sase Dubai uyazi ukuba ungaphila. Kulo msebenzi uphupha karhulumente e-Dubai.
Ngaphezulu kwe-80 ipesenti yabahlali eDubai. Ndingathanda ukuqala ngokusebenzela iinkampani zikarhulumente. Ngokunikwa ngala manqaku, senze uphando kwi-UAE. Kwaye safumanisa ukuba unamava obuchwephesha. Izokukunceda kulawulo lomhlaba amathuba kwiinkampani ezenziwa ngurhulumente. Iprojekthi yethu yophando iveze ukuba Iindleko zifuna umsebenzi owenziweyo kwiinkampani zikaRhulumente. Njengokhetho lweNombolo1 ekuphuhliseni umsebenzi wabo wobomi.
Njengoko kubonisiwe ngentla, kunye nequmrhu elikhulu unamathuba amakhulu okubekwa. Kwaye uninzi abazingeli bomsebenzi wasekhaya. Ukutsho ukuba sele bezibekele usukelo lomsebenzi. Ukuqala ingqesho kurhulumente. Enye yezona zinto zibalulekileyo zomsebenzi yiBayt onokwazi Fumana amathemba omsebenzi kuMbindi Mpuma.
Uphononongo lwakutshanje lweMisebenzi ye-Emirates. Isishwankathelo, sabonisa ukuba i-45 ipesenti yabaqeshi e-UAE. Ngokubanzi, ucwangcisa ukuphuhlisa ishishini kwaye unyuse ukubekwa ngaphezulu ngonyaka ixesha nakwamanye amazwe e-GCC.
Emirates Imisebenzi neMisebenzi yezeMali e-Dubai
Uninzi lwabaphangeli lujonge imisebenzi ye-Emirates. Ethubeni umsebenzi kwicandelo lezemali labucala e I-UAE lukhetho olufanelekileyo. Indawo esihlala sijongelwa kuyo yimisebenzi enkulu yemibutho yezemali. Ngokwenyani, kukho iinkampani ezincinci ezinezithuba ezininzi. Asinguye wonke umntu onamaphupha ukusebenza kumacandelo karhulumente karhulumente. Ngoko mahluke kwabanye kwaye ufune iinkampani ezincinci zemali. Ngokomzekelo iinkampani zokutshintshana ze-FX kunye neentengiso ze-pawn. Ziindawo ezilungileyo kakhulu zokuqala umsebenzi omtsha.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba unamava okwandisa kwimarike yemali. Kukho imisebenzi emininzi yemali Amathuba atholakalayo kwii-exports e-UAE. Kuya kufuneka ujonge ezinye zeziseko. Kwinyani yomsebenzi wezemali ikwanokukhethwa zokuthengisa kumazwe e-GCC. Ke ayisiyi-Dubai ne-Abu Dhabi kuphela.
Kuhlahlelo lokugqibela imisebenzi kwezemali kufanelekile ukuba iqeshelwe. Kungenxa yokuba iinzame zakho ejolise ekufumaneni umsebenzi ofanelekileyo. Kwaye ekuhambeni kwexesha, ngokuqinisekileyo ungahambela kwizikhundla zolawulo. Kwaye kwiibhanki zemali zaseMbindi Mpuma kunye nokubonelela ngemibutho ehlawula kakuhle umntu olungileyo.
Indlela yokuqala umzobo uyilo e Dubai
Njengoko sele kuphawuliwe udinga iiseti ezithile zezakhono zolu hlobo ukuba imisebenzi ye-Emirates. Ukuqala umsebenzi omtsha wokuyila imifanekiso kwi-Mbindi Mpuma. Ubukhulu becala, kuya kufuneka ube nobuchule ukugcina imeko yengqondo ikwinqanaba eliphezulu. Ngaphezulu kwayo, kufuneka wakhe iinkcubeko zenkampani ngezikhokelo zophawu lweshishini. Kungekudala njengoyilo lwegraphic, kuyakufuneka ulawule iiprojekthi ezikumgangatho ophezulu.
Ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka wenze iikhonsepthi ezibonakalayo zabaphathi. Kwaye kunjalo Abanini bamashishini bamanye amazwe neenkampani zabo. Uninzi lwamashishini asekwe kwi-Abu Dhabi nase Dubai. Ngalo lonke ixesha unemibono yeprojekthi yokunxibelelana. Ngokubanzi njengoyilo kufuneka udale imibono ekhuthaza abantu. Njengolwazi malunga nesiphumo okanye ukuvela.
Ungayichazanga eyokuba kufuneka ube yingcaphephe kwiAdobe Photoshop. Ukungathethi nto ngeenkqubo zeModeli, uyilo lwangaphakathi nolwangaphandle kunye nezinye iinkqubo ezifanelekileyo. Kwakhona uyilo awuzange usebenze yedwa. Uza ku amaqela axhasayo wentengiso kwiiprojekthi zosasazo zasekuhlaleni ezahlukeneyo. Kwelinye icala, iimfuno ozifunayo. Ngokwenene njengabaphathi beentengiso ozifunayo. Isiqu sobuchule bokuyila ngemizobo. In kwi-Middle East, bakhetha idiploma yaseyunivesithi yase-UAE.
Okwesi sikhundla, ukongeza, ufuna amava oyilo lokubonwayo yoyilo olusisiseko lonxibelelwano. Ngokubaluleke kakhulu kuwe ukuba ube nolwazi lweengcali zoyilo isoftwe ezifana ne-Photoshop kunye ne-InDesign program ngaphezulu Illustrator, Sketch, kunye nezinye ezininzi.
Indlela yokufumana imisebenzi yokuthengisa e Dubai nase-Abu Dhabi?
Umsebenzi wokuthengisa kuMbindi Mpuma. Nangona oku kunokuba yinyani kulo msebenzi Okuchasene, amathuba ukususela Dubai iphumelele i-Expo 2020. Umsebenzi we-Emirates kumacandelo entengiso akhula minyaka le. Ukusuka kwingcali yentengiso yedijithali ukuya kumlawuli omkhulu wentengiso. Yonke into inokwenzeka xa u tyelela u-Abu Dhabi ukuzingela umsebenzi. Enye yezona ndawo zona msebenzi ophezulu wokuthengisa umsebenzi ngu-Angel.co
Imisebenzi yokuthengisa Kulula ukufumana. Ngale njongo, unokufumana umsebenzi phantse kuyo nayiphi na inkampani. Kuba ukuthengisa akupheleli kwiinkampani zentengiso. Zonke iintlangano ezinkulu zinesebe langaphakathi lokuthengisa. Ungayifumana ke jonga iinkampani ezikuMbindi Mpuma ze uqhubekeke wenze isicelo kwizithuba zomsebenzi ezikhoyo. Umsebenzi wentengiso ubandakanya ukuphathwa kweendaba zosasazo kunye nentengiso ngqo yentengiso. Ukubeka ngenye indlela, ukuba unezakhono ezaneleyo ungasifumana isithuba esihle.
Omnye wemizekelo yabaqeshi abahlawula kakuhle kushishino lokuthengisa ziinkampani ze-SEO. Olu hlobo iinkampani ezityala imali eninzi kuMbindi Mpuma. Elinye inqaku eliphambili kule misebenzi kukuphakanyiswa kwesakhiwo. Umzekelo, unokukhuthazwa kwiinyanga nje ezimbalwa ukuba uyabaleka imikhankaso yokuthengisa kwinqanaba eliphakamileyo. Kwelinye icala, unokuyiqala inkampani yakho kwikamva elizayo ukuba ufuna ukuba nayo.
Ke ukuthengisa imisebenzi ye-Emirates yintengiso ephambili. Kwakhona, awudingi imfundo ingako. Konke okudingayo ukuba nezimvo zakho eziphucukileyo. Kungenxa yokuba umqeshi omtsha uhlala elindele ukuhamba kwemali kunye ne-ROI. Ngokubanzi ayisiyiyo into oyifundileyo esikolweni.
Imisebenzi yolondolozo yabucala e-Dubai ifumaneka kwindlela yokukhawuleza!
Umsebenzi we-doorman njengabantu abachazwe ngokufanayo. Mane nje ubandakanye ukunceda abanye kwaye ubagcine bekhuselekile. Kwicala elingelilo elingalunganga kangako ngengeniso. Kodwa enye ye imisebenzi ekhawulezayo onokuthi uyenze inkanyezi ngeziqinisekiso eziphantsi ngunogada. Kwelinye icala eDubai, sisikhundla esihle kakhulu. I inqanaba lolwaphulo-mthetho kwi-UAE yi-0% ke kufuneka usekwe koko kuphephe ukwenza umsebenzi.
Engqondweni, kunjalo, ungalawula iintlobo ezininzi zemisebenzi yokugada. Kodwa kwiSixeko saseDubai, kukho abaphathi abarhwebayo abasebenzayo. Ke ukufumana umsebenzi wabucala wokhuseleko kuyangqineka. Ukunceda abanye ugcine ukugcina ukuba yile nto othanda ukuyenza? Faka isicelo sokhuseleko izikhundla ezikhoyo kwindawo yomsebenzi. Kodwa kufuneka ugcine oko engqondweni ukuba eminye imisebenzi ihamba nayo kids ukuya esikolweni. Ukuhamba nokulinda xa umqeshi wakho esiya ezivenkileni. Ukuchitha iiyure ezininzi emotweni okanye iveni ulinde into.
Kodwa kwelinye icala, ukhuseleko lwabucala lunobuhle bayo. Udidi lweshishini lokuhamba, ezemidlalo kunye nohlobo oluqaqambileyo lwe iimoto njengeBMWi7 kunye neMercedes SLR. Kwaye okuninzi onomdla kakhulu ugqibile ukuba uya kuba nenxaxheba. Umzekelo, ukuba abaqeshi bakho baya eCyprus uza kubhabha kunye naye. Uya kuhamba ukuya indawo emangalisayo kwimisebenzi efana neMzantsi Afrika kwaye wenze imali ngexesha elifanayo. Ngoko kuya kwenene kuwe ukufumanisa ukungabikho komsebenzi kunye neempembelelo zalo msebenzi.
Indlela yokufumana imisebenzi yakutshanje e-Dubai nase-Abu Dhabi?
Umsebenzi onzima kunabo bonke kwilizwe lemisebenzi ye-Emirates. Indlela yokufumana imisebenzi yakutshanje e-Dubai nase-Abu Dhabi. Impendulo ayikho lula !. Yonke imihla umzingeli omtsha wophando ophanda ngeGoogle kwizithuba zomsebenzi ezihlaziyiweyo. Ayinguwe wedwa ophanda imihla ngemihla. Imithombo yeendaba zentlalo okanye i-intanethi yamasango omsebenzi. Enye yeendlela ezilungileyo zoko icwangcisa izilumkiso kwizithuba zomsebenzi. Xa kuvela isithuba esitsha ekufuneka sithathiwe. Uya kufumana eso saziso kwi-imeyile yakho yeMisebenzi eNtsha yase-Emirates. Ke qhubeka kwaye ufumane i-portals yomsebenzi. Ngubani onako kukunceda ukuseta izilumkiso zomsebenzi Qiniseka ukuba ukhethe ezona zichanekileyo.
Imisebenzi yakutshanje e-Dubai ikhona i-2018 ngoko kukho ukuqala konyaka. Kukho ixesha lokukwenza kwaye ufumane imisebenzi yama-Emirates. Eyona nto ingcono Umsebenzi omtsha ngowamawebhusayithi angamawebhusayithi. Kwakhona, ukuhlelwa okuhlanjululwayo kunceda kakhulu ekuzingeleni umsebenzi. Iinkampani ezincinci asinalo uhlahlo lwabiwo-mali oluza kuchitha kwi-adversi ebiza. Ngoko ke bathumela izithuba zemisebenzi kwizaziso zengingqi zendawo.
Ukufumana imisebenzi yakutshanje oyifunayo ukulawula izivakalisi zakho zendawo. Fumana iiwebhusayithi ezifanayo kwiGoogle ngamagama afana nawo Imisebenzi e-Dubai 2020. Kwaye ujonge Jobs Dubai kwi-2018 yamathuba emisebenzi yamva. Zama ukuba nobuchule kunabo abanye abantu abafuna umsebenzi kwaye ujonge kwi-Linkedin nakuFacebook. Kukho inkampani encinci enkulu ekuhlaleni yokufuna umsebenzi e-Abdu Dhabi. Kwaye konke ukuthunyelwa imisebenzi inikezela kwi-2020 kubafuna imisebenzi yasekhaya.
Imisebenzi e-Accountant e Dubai kunye neenkampani ezikhokelayo
Imakethi yemali kwi-UAE isakhula Expo 2020. Isilinganiselo esikhulu sophuhliso ukusukela ekubeni i-1999 ikwazi ukulawula isiXeko saseDubai. Ukufumana nje olu hlobo lomsebenzi unokuqala njenge-accountant junior. Njengombandela, kukho imisebenzi embalwa ebalulekileyo ekufuneka uyilandele. Unale nto engqondweni. ungaqala ukusebenza yinkampani enkulu. Ngamanye amagama, qala ukusebenza ku-Abu Dhabi phantsi kolawulo lomphathi omkhulu wezezimali. Ngenxa yesi sizathu, uya kukwazi ukufumana i-ofisi ephethe iprojekthi yakho.
Ukongeza, umphathi weakhawunti uya kudinga ukulungelelanisa intofontofo utyalo-mali iphothifoliyo yabathengi. Ngokudibeneyo nokuhlawulwa kwenkonzo yamakhasimende. Nganye ye Utyalomali kufuneka lulungiselelwe kwinqanaba eliphezulu. Ayisiyomfanelo kuphela eya kulungiselela ii-invoice kodwa nokulandela iintlawulo. Kwaye ngaphakathi Imarike yezorhwebo eMiddle East, kukho ukuthengiswa kwemali eninzi. Ungathethi ukuba kuya kufuneka ufumane imvume yokulawula ngokupheleleyo. Ngokuqhelekileyo uthetha kumphathi weofisi okwangoku. Ngakolunye uhlangothi, ukusebenza ngaphambi kokuba iindleko zenzeke.
Ngokubanzi, bonke bayazi i-Abu Dhabi Bank yeBhanki. Kwakhona, iBarclays Bank Plc yeyona nkampani inexabiso likhulu ukusebenzela eYurophu. Ngaphezulu i-Dubai Islamic Bank kunye ne-Emirates Bank International enye yeenkampani ze-2 ezifanele ukujonga. Kwaye ekugqibeleni iBhanki kaZwelonke ye-Abu Dhabi kunye neBhanki yeSizwe yaseDubai. Zonke ziyindawo ezimangalisayo zokuqala umsebenzi wakho wamaphupha.
Umsebenzi wezeMali ngumsebenzi onzima ukwenza!
Ewe ayikaze iphele imini yomsebenzi wobalo-zincwadi. Ngesi sizathu, ukwenza nawuphi na umsebenzi onzima kunye nemisebenzi enokuthi yabelwe. Ngamaxesha ngamaxesha phantsi kwezo meko zisebenza ngaphezulu kwe12h ngosuku. Ukunceda umphathi wezemali kunye nabaphathi beofisi ukuqhuba amasebe ezemali. Ngenxa yoko kuveliswa iingxelo ezingenakubalwa zokubonelela ngeengxelo ezintsha. Ngesi sizathu, jonga iinkampani ezimbalwa ekufuneka uqale ukusebenza kwicandelo lezemali.
Ukubeka enye indlela kubaluleke kakhulu ukuseka inkqubo yokugcwalisa efanelekileyo. Ukongeza ukusebenza kwii-invoice zabathengi kunye nee-invoice zabathengisi. Ukujonga iibhili zemali elula, iibhanki nangokuchaseneyo imbalelwano. Ngokuthelekisa ngokusebenza kunye neentlawulo zebhanki, amakhadi etyala kunye ezininzi amathuba amashishini ngakumbi kwi2020. Ngolungiselelo olufanayo lwethokheni yokuhamba kwemali rhoqo ngenyanga. Nangona oku kunokuba yinyani ezinye iingxelo zemali nazo kufuneka zenziwe. Kwangelo xesha unxibelelane nombutho. Kwaye uMlawuli wezezimali kunye nomphathi wecandelo kuyo yonke imiba efanelekileyo. I Ngokuqinisekileyo imisebenzi ye-Emirates akufuneki kube lula ukuyifumana kodwa iya kuba nzima ukufumana.
Nguwuphi uhlobo lwemisebenzi ye-Intanethi e-Dubai nase-Abu Dhabi ekhoyo?
Umsebenzi kwi-Emirates ungafumana kwiibhodi ze-intanethi. Idolophu yaseDaibha ehlinzeka ngezithuba ze-25,000 kwi-intanethi kwinyanga nganye. Ngoko nayiphi na into ofuna ukuyijonga ngokuqinisekileyo uyayifumana. Imisebenzi ye-intanethi iyahluka ukusukela kumgangatho oqhelekileyo wokubekwa umsebenzi. Ukucacisa e-Abu Dhabi kukho okwangoku kukhangela iMenenja yokuThengisa iWindows ukujoyina iqela labo.
Ukubeka ngenye indlela, abaxhasi be-intanethi bafumana izibonelelo zemisebenzi. Ngenxa yesi sizathu, qiniseka ukuba i-KPIs idibeneyo ngamaxesha onke ngemisebenzi yokuthengisa inthanethi. Into yokuqala yokukhumbula uya kusebenza ngokukhawuleza kunye namaqela okuthengisa eCommerce e-Abu Dhabi. Kwinqanaba elibi ekuphuhliseni umsebenzi we-inthanethi nokulawula nokuphucula izitolo ze-intanethi. Kubalulekile kwimisebenzi ye-intanethi e-Abu Dhabi. Ngaphantsi kwezo meko, ukuxhaswa kwe-IT kubaluleke kakhulu. Kwimeko apho, iqela lokuthengisa liya kusebenza kunye nawe.
Ukwenza umdla malunga ibango ngaphakathi kwemisebenzi ye-Emirates zihlala zivulekile. Ungafumana izithuba zomsebenzi ezikwi-Intanethi kwiivenkile ezikwi-Intanethi, iinkampani ze-SEO, ukucebisa ngeshishini elikwi-Intanethi ukongeza ungaba yingcaphephe ye-Intanethi ye-IT. Ngendlela efanayo umsebenzi we-intanethi ekuvuzayo ngokusebenza kwakho nzima kunye nempumelelo eDubai nase-Abu Dhabi.
Kwangelo xesha, unokulindela ibhonasi elungileyo kakhulu kunye nomvuzo okhuphisanayo kunye nezibonelelo zeinshurensi yezempilo. Nokuba uziva ngathi imisebenzi ye-Emirates ilungiselelwe wena. Nokuba kwenzeka ntoni ukuba ube yinxalenye yenkampani ephumelele kwi-Intanethi. Ngokwenyani nceda ufake isicelo kwizithuba ezininzi ezine-CV ehlaziyiweyo ngomsebenzi we-UAE.
Indlela yokukhangela kwaye ukhethe imisebenzi yokungena kwedatha e-Dubai?
Ukukhangela kunye nokukhetha imisebenzi yokufaka imisebenzi yezithuba zemisebenzi. Akunjalo lula, ezinye zophando zibonisa ukuba zisebenza ngee-arhente zengqesho. Ngokuqinisekileyo, sinceda umhlaba ngomsebenzi wokungena kwedatha e-UAE. Ukuphinda ngokumalunga nokulo hlobo lwezikhundla. Sibona uphuhliso lwezoqoqosho kwiinkampani ze-UAE. U-Abu Dhabi, ngakolunye uhlangothi, ukhangela kubafundi belizwe abanamakhono abanolwazi. Eyona nto ibhetele, inene, ineenkcukacha zokungena kwedatha kwaye isele isebenze njengomququzeleli we-UAE.
Ukuyibeka ngenye indlela, qinisekisa ulwazi lokuchaneka xa uchwetheza ngumba ophambili. Ngemisebenzi ye-Emirates, kufuneka uhlele ulwazi ngokwezinto eziphambili zikarhulumente. Oko kukuthi, lungiselela imithombo yolwazi yokungena kwikhompyutha yeyona nto iphambili. Le misebenzi kufuneka ifake isicelo seenkqubo zedatha kwaye Iinkqubo zeeprojekthi ezintsha e-United Arab Emirates.
Inqaku elihlala lijongelwa phantsi likhupha iingxelo zangaphakathi. Kuninzi ngakumbi okubandakanyekileyo koku. Kwicala elingalunganga lomsebenzi kwiindawo ezichongiweyo kwaye wenze imisebenzi yokulondolozwa emva kweeyure zomsebenzi kubalulekile. Yokuphela indawo unokufumana idatha yokungena yomsebenzi kukwazi abantu inxaxheba kwiprojekthi. Umzekelo abameli bakarhulumente kwiOfisi. Okanye kwimibutho yabucala ethile esebenzela ezinye iiprojekthi zolwazi.
Ukufumana imisebenzi yobuhlengikazi e Dubai nase-Abu Dhabi
Umsebenzi wezobuhlengikazi ngokomzekelo kwi-UAE idinga ama-degree ngokuqinisekileyo. Ukubonisa ukukhangela umsebenzi kwi-UAE. Njengoko umongikazi uluvo oluhle e Dubai. Ewe, ukuba unamava. Abasebenzi abavakalayo ngokubanzi nabahlengikazi-imisebenzi yokugulisa inzima. Kuze kube ngoku, unokusingatha isikhundla kwizibhedlele zase Dubai.
Ngaphandle kokulibaziseka umsebenzi wokuba ngumongikazi oqeqeshiweyo obhalisiweyo kunye nonyango. Yiba nokufumaneka nakubantu abasuka kwamanye amazwe. Lo msebenzi ubandakanya ukuphatha abanye. Okwangoku unesi ubonelela ngononophelo ngqo kwizigulana dubai izibhedlele. Ngaphambili, le misebenzi inzima ilungelelanisa ukubandakanyeka okuninzi. Embindini wemisebenzi enxulumene nokhathalelo lwezigulana kusetyenziswa inkqubo yesayensi yokwamkela iindwendwe yase-Arab kunye neenkonzo zonesi.
Apha nalapha ukhathalelo lokonga lubonelelwa kubantwana. Ngasemva, abantu abadala kunye nabemi bejometri. Imisebenzi ye-Emirates njengomongikazi ophethe ukuqonda uxanduva lokuphatha izigulana ezitsha. Ngoku okanye mva Sebenza kwiindawo zonyango ngaphakathi kwamava esibhedlele xa kufuneka.
Imisebenzi ephuthumayo eDaibha kubathunywa belizwe
Wonke umntu ofuna umsebenzi ufuna umsebenzi kwi-Middle East. Ixabiso le bahlala e Dubai inkulu, ihlawula irente, amatyala ombane kunye nezinye ezininzi. Yiyo yonke eza kumbuzo omnye. Indlela yokufumana umsebenzi eDaibha njengesiza ngokukhawuleza konele?. Konke ngokukhawuleza kodwa kukho impendulo eyodwa kuphela. Ukuthumela isicelo sakho sengqesho yonke indawo kunye ne-imeyile ongayifumana.
Abanye abathunyelwa e-UAE banamava ngokufumana umsebenzi. Akufanelanga woyike ukucela ingcebiso. Owona msebenzi ungxamisekileyo ungawufumana eDubai yiKhitshi porter. Olu hlobo Umsebenzi okwangoku unangoku yeyona nto inzima ukuphathae. Imisebenzi yendalo kunye nemisebenzi yezandla kulula kakhulu ukuyifumana. Khangela imisebenzi esisiseko kakhulu kwintengiso zasekhaya kunye nokufowuna kubaqeshi. Kuya kufuneka ufumane umsebenzi kwisixeko samaphupha ngokukhawuleza. Ayisiyiyo into obuyikhangela kodwa unokuhlala uyitshintsha. Ke nyani sukukhathazeka kakhulu. Kwaye zama nje ukuqala umsebenzi e-Dubai kungakhathaliseki ukuba yiziphi iindleko eziya kubandakanywa kulo.
Indlela yokufumana i-Emirates Group Careers ngexesha langoku?
Ok, ngakolunye uhlangothi, kufuneka songeze ii-Emirates Group Careers kwoluhlu. Ukusebenza neQela le-Emirates, ekugqibeleni, liyinqaku eliphambili lokuthanda ukulondoloza lakho ikamva. Kwi-UAE kaZwelonke kunye Iinkonzo zokuqashwa ngamazwe ngamazwe. I-Emirates yokuqesha abaphathi bazinikele kakhulu kuyo ukuqeshwa bagxotha ilizwe ukusuka kumazwe aseAsia nakwi-GCC. Ukuqala, utyalomali olukhulu oluya kunceda i-Emirates ikhule kwimisebenzi ye-Expo kwi-2020.
Kwimvelaphi shishini lesikhululo yindawo yemisebenzi emitsha ye-Emirates. Abaphathi bokuqasha bahlala bekhuthaza abasebenzi ngokufihlakeleyo ngokunyaniseka kweqela. Ukuchasana neenkampani ezingezorhulumente Iqela le-Emirates. Ngokuqinisekileyo ukusebenzela ukuzibophelela kunye nophuhliso ukuze uphumelele. Kweli cala jonga kwiwebhusayithi yomsebenzi wabo kwaye ufake isicelo kwi-Resume ehlaziyiweyo.
Isikhokelo kunye namaQela eMsebenzi
Ngaphambi kokuba uhambe, kufuneka ukhangele Inqaku eliseMiddle East elivela kubalandeli bethu. Ungawufumana lula umsebenzi kwi-UAE. Sakha amaqela imisebenzi emangalisayo yabakhangela imisebenzi. Umzekelo, ungongeza i-CV yakho kweyakho umzi amaphupha kwi-Gulf. Qhagamshelana nabanye abafuna umsebenzi abafuna umsebenzi. Emva koko phawula abaphathi abatsha abaqeshwe ngeCV yakho ehlaziyiweyo.
Kwiminyaka elandelayo i-market iye yafudukela ngamandla ukuqashwa kwefowuni unokusebenzisa i-android yakho ukuze ufumane umsebenzi.
Imisebenzi ye-Emirates kunye nokukhangela umsebenzi kwi-UAE!
Ngoku sisebenzela imisebenzi yase-Emirates e-Dubai nase-Abu Dhabi
Fumana UYobhi e Dubai Ngokumangalisayo unokufumana loo ndoda yephupha. Ukulayisha nje uqale kwakhona kwaye uqale Emirates Career entsha dubai!
Layisha kwakhona kwiSixeko esakhawulezayo esakhulayo emhlabeni! - Inkampani yeSixeko sase Dubai